Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Ayo". ကျွန်ုပ်တို့၏ Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝ Story- အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနေ့စွဲရန်။ Alchetron နှင့်ပန်းတိုင်မှအကြွေး
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကို "သူ့ကိုစေသည်ရာမဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအနေအထားလိုက်လျောညီထွေရှိသူ၏ဘက်စုံသုံးအကြောင်းကိုသိတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမစ္စတာ"။ သို့သော်ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေကသာလက်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Ayoze ဖာရရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များ Ayoze Perez Gutierrez ဖြစ်ကြသည်။ သူကမကြာခဏခေါ်တော်မူအဖြစ် Ayoze ဖာရ Santa Cruz က de Tenerife, စပိန်အတွက် 23 ဇူလိုင်လ 1993 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်အနောက်မြောက်ပိုင်းအာဖရိက၏ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်ရီကျွန်းစု၏ဇာတိများဖြစ်ကြတဲ့သူ Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိဘများ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိဘများ။ Instagram ကိုမှအကြွေး
ပရိသတ်များယုံကြည်သောအရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ Ayoze Perez ၏မိသားစုသည်စပိန်နိုင်ငံနှင့်အလွန်ဝေးသောအနောက်အာဖရိကကျွန်းတစ်ကျွန်းမှဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းကျွန်းသည်စပိန်နိုင်ငံကကိုလိုနီခေတ်တွင်တည်ရှိပြီးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီးမော်ရိုကိုနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသည်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိသားစုနောက်ခံနဲ့မူလအစ။ MJ, ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်ဝီကီပီးဒီးယားနှင့်အတူခရီးသွားမှ credit ။
တစ်ဦးလူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေကြီးပြင်း Ayoze ရှမွေလသည်သို့မဟုတ် Sammy သည်သူ၏နည်းနည်းအစ်ကိုများနှင့်မိဘများနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအမည်ရှိသည်သူ၏ကြီးမားသောအစ်ကိုနှင့်အတူအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိသားစု။ Instagram ကိုမှအကြွေး
Ayoze ဖာရလည်း Tenerife အတွက်မြို့သား 84.9% ဖွဲ့စည်းရန်အဓိကဘာသာတရားအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သောခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ရိုမန်ကက်သလစ်နျဌာနခှဲကနေတစ်ဦးဘာသာရေးအိမ်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Ayoze ဖာရပုံကသူ့အစ်ကိုရှမွေလသည်လက်ျာဘက်ပုံ, ထားခဲ့တယ်။ Instagram ကိုမှအကြွေး
နှောင်းပိုင်း 1990s စဉ်အတွင်း Tenerife ၏အိပ်ချင်ကျွန်းမှန်မှန် Ayoze နှင့်သူ၏ကြီးမားသောအစ်ကို Sammy ဖွငျ့ဘောလုံး၏ဆူညံသံများကနှောင့်အယှက်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့တက်ကြီးထွားလာခဲ့ကြစဉ်အခါ, pair တစုံကိုလယ်ပေါ်နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုနေအိမ်အတွင်း၌နှစ်ဦးစလုံးနေ့တိုင်းအတူတူဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။
ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုသိတယ်သူများသည်၎င်းတို့၏ဂိမ်းအပေါ်ထူးခြားတဲ့ဆက်သွယ်မှုများနှင့် telepathic နားလည်သောအနာဂတ်ကြယ်ပွအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားလေးများကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းပေါ်, နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားလေးများအနေနဲ့အကယ်ဒမီမှတစ်ဆင့်ဘောလုံးပညာရေးကိုလက်ခံရရှိ၏အိပ်မက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ မိုးလုံလေလုံပစ်ခတ်မှုအလေ့အကျင့်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိဘများ Tenerife ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့အကယ်ဒမီ, CD ကိုစန်း Andre မှသူတို့သား whisk ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဘောလုံးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သူတို့၏အခွက်တခုအဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း Ayoze နှင့် Sammy နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအခြမ်း, CD ကိုစန်း Andre ၏တန်းစီဇယားသို့စာရင်းသွင်းတဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။
Ayoze အနေနဲ့တိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူအဖြစ်ကစားနေစဉ်, သူ့အစ်ကိုရှမွေလသည်ရှေ့ဆက်အဖြစ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၏မိဘများနှစ်ဦးစလုံးအမြိုးသားတို့ကသူတို့ကိုအတူတူနေဖို့ရန်အဘို့အနိုင်ရေးအတွက်တူညီတဲ့အသင်းအတွက်ကစားမယ်လို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ တူညီတဲ့အသင်းအတွက်အတူတကွ featured တဲ့ယှဉ်ပြိုင်သူ့ကိုအစာရှောင်ရင့်ကျက်ဖန်ဆင်းသောပိုကြီးကစားသမားဆန့်ကျင်ကစား Ayoze ကိုမြင်တော်မူ၏။
CD ကိုစန်း Andre မှာ4နှစ်ကြာပြီးနောက်ငယ်ရွယ် Ayoze UD Santa Cruz, ကျွန်းမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးဘောလုံးအကယ်ဒမီ၏တဦးတည်းဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရသော Tenerife အကယ်ဒမီသို့ငယ်ရွယ်ကစားသမားထုတ်လုပ်တဲ့နာမည်ကြီးတစ်ဦးအကယ်ဒမီတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့တယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှလမ်း
Tenerife နှင့်အတူအကြီးတန်းဘောလုံးကစားသမားဖြစ်လာရန် Ayoze ရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်ပဌနာတစ်ဦးအဖြစ်မသွားဘဲ ဖန်စီဖြတ်သန်း။
Fame ပုံပြင်မှ Ayoze ဖာရက်ရဲ့လမ်းမ။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးမှအကြွေး
ယခုနှစ် 2011 နှင့် 2012 သည်သူ၏ငယ်ရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အလှညျ့အပွောငျးမှတ်သား။ ဒါဟာသူအသီးသီး Tenerife B နဲ့တစ်ဦးမှရာထူးတိုးတယ်ယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Real Madrid အသင်းနှင့် FC အသင်းဘာစီလိုနာငြင်းပယ်:
Ayoze Tenerife နှင့်အတူတစ်ဦးအထင်အမြင်အောင်ကိုစတင်ရန်အဘို့အဒါဟာတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။ အောက်တိုဘာလ 2014 ခုနှစ်, Ayoze အဆိုပါ 2013-14 ရှေး Division အတွက်အောင်မြင်မှုများ Player ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူလည်း 2013-14 ရှေး Division ဆုအတွက်အလယ်တန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Ayoze အလွန်လျင်မြန်စွာရှေးတိုင်း၌သူ၏အထင်ကြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကျေးဇူးတင်အကြီးတန်းရာထူးတက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒီအမြင် Real Madrid အသင်းနှင့်ဘာစီလိုနာ 2014 ၏နွေရာသီကာလအတွင်းသူ့ကိုန်းကျင် sniffing ။ scouted သောကြီးမားသောကလပ်အသင်းများထဲတွင်တကယ့် Ayoze လက်မှတ်ထိုးရန်အလိုဆန္ဒပြသောနယူးကာဆယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်းသိလား?… ထို့အပြင်တစ်ဦးဘောလုံးသမားသူ Ayoze ဖာရအစ်ကိုရှိကလပ်နှင့်အတူမိမိကိုမိမိပြုပြင်တာတွေများ၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူအင်္ဂလန်ကသူ့အစ်ကိုကိုလိုက်နာရန်သူ၏ကလပ်စွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ နယူးကာဆယ်လ်အတွက်သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေနားလည်သဘောပေါက်ရန်မြောက်ပိုင်း Tenerife အတွက်နေသာ Santa Cruz ကျန်ရစ်ခဲ့သူညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်။
အတူတူသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေအသကျရှငျ Ayoze နှင့် Sammy ။ Chronicle တိုက်ရိုက်ရန်အကြွေး
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှထလော့
နယူးကာဆယ်ခေတ်သစ်ဂိမ်းထဲမှာမြေပဲကြေးဖြစ်သော Ayoze ဘို့ပဲ£2သန်းပေးဆောင်။ နယူးကာဆယ်မှာဆိုက်ရောက်ပေါ်၌ Ayoze သူ့အစ်ကိုရှမွေလသည်နှင့်အတူအပြားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
နှစ်ဦးစလုံးညီအစ်ကိုတွေမြို့, ဘာသာစကား, လူများ, ယဉ်ကျေးမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သင်ယူခဲ့ရတယ်။
ဖာရက်တစ်ကြိမ်ကဆိုသည်။ "ငါကအင်္ဂလန်မှာအားလုံးဘာမှတည်ရှိပြီးခံခဲ့ရရာအရပ်လောက်ကိုမဆိုစိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာနယူးကာဆယ်ခဲ့ရုံဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့တွေ့မယ့်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးကဒီမှာလာသောအခါအ yeah, ငါသည်ငါ့အစ်ကိုနှင့်အတူကျော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီငါသူသည်ငါနှင့်အတူ လာ. ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီးမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အဖြစ်, nah သူ့ကိုငါမေးသော်ဘယ်တော့မှသူ့ကို လာ. ,! ကျနော်တို့အတူတကွအပေါင်းတို့သည်လမ်းဖြစ်ပြီ။ "
၎င်း၏သူတို့အိမ်ပြန်မခေါ်ရသော Tyneside မှာညီအစ်ကိုတို့သည်အကြီးအနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကောင်းသောအချိန်လေး, ဘောလုံး၏ဆိုးအချိန်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကသကဲ့သို့, တိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူရှိပါတယ် နဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ် ပူးပေါင်း. မြင့်အားကြီးသောဖြစ်လာ ဆော်လမွန်Rondón.
Fame ပုံပြင်မှ Ayoze ဖာရက်ရဲ့ထ။ Chronicle တိုက်ရိုက်ရန်အကြွေး
ကိုယ့်အလန်ရှီးယားကဲ့သို့ Ayoze အမြဲတမ်းနယူးကာဆယ်ဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ကိုအောက်မေ့ပါလိမ့်မည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုမှ Ayoze ဖာရက်ရဲ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူလူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းအပေါ်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် ...Ayoze ဖာရက်ရဲ့ရည်းစား, ဇနီးသို့မဟုတ်ဖျားခါသူကားအဘယ်သူ?.
Ayoze ဖာရက်ရဲ့ Girlfriend ။ Instagram ကိုမှအကြွေး
Ayoze ဖာရက်၏ဖြစ်နိုင်သည်ဝှက်ထားသောအချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝကအရမ်းပုဂ္ဂလိကကြောင့်အကယ်စင်စစ်ရိုးရိုးအများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှရာတစျခုဖွစျသညျ။ နှစ်တွေ Ayoze ဖာရ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ပါသည်နှင့်သူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝအပေါ်မည်သည့်မီးမောင်းထိုးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုခက်ခဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောအသက်တာကိုအကြောင်းကိုမဆိုကွန်ကရစ်အင်ဖိုရှိသည်ဖို့စေသည်။
သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်အစီရင်ခံစာအရသိရသည် Ayoze ဖာရက်တစ်အဆိုပြုချက်ကိုမချခင်ကျော်ကို3နှစ်ပေါင်းသူ့ပါမယ်မသိသောရည်းစားနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ FootallImagines အဆိုအရ;
"Ayoze ဖာသူမ၏နှင့်အတူဝေးလံသောဖြစ်ခြင်းစတင်သည်နှင့်သူမသူမနှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက်မယ့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပေမယ့်သူ (ကပွဲစဉ်အပြီးတွင်ကွင်းပေါ်) အဆိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ရဲ့ထွက်လှည့်။ " ဒါဟာအခုသူတို့နေဖြင့်လက်ထပ်သင့်ကြောင်းယူဆပါတယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ကွာဘောလုံးကွင်းထဲကနေ Ayoze ဖာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာရစေလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ကာဖာရက်, အသည်းအသန်ရက်ရက်ရောရော, နွေးနှလုံး, ချိုသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူ့ကိုဘောလုံးကွင်းတစ် Darling စပျစ်နွယ်ပင်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
မင်းသိလား?… ဖာရနယူးကာဆယ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်သံအမတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုသူဘောလုံး၏ဆွဲဆောင်မှတဆင့်ကလေးတွေနှင့်အတူလူမှုရေးပါဝင်မှုများအတွက်ကျောင်းများမှာတက်ပြန်သွားလေ၏။
Instagram ကိုမှ Ayoze ဖာရကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ Facts- Credit
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
Tenerife မှစ. Tyneside ရန်, Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိသားစုဟာသူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသား၏အောင်မြင်မှုနယူးကာဆယ်ကျေးဇူးတင်စကားမှာနေအိမ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်သူတို့အအောင်မြင်ဆုံးမိသားစုဝင်များ၏မွေးနေ့ဆင်နွှဲအဖြစ်ဖာမိသားစုကဧရာပျော်ရွှင်မှုခဏပြသပေးသောဗီဒီယိုတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်နှင့်အထက်မိသားစုဗီဒီယိုမှတရားစီရငျ, သင်အလွယ်တကူသူဖခင်ထက်မိမိအမိကိုထက်အများကြီးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Ayoze'' s ကိုသူ့မိဘအဆင်ပြေဖြစ်ကြပြီးအကြောင်းအရာဘောလုံးအားမိမိကတိကဝတ်ဆင်တူသည်သေချာအောင်ဖို့ဆည်းကပ်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့မိခင်။ Instagram ကိုမှအကြွေး
မိမိအညီအစျကိုအကွောငျးကိုပိုမို: ရှမွေလသည် Perez Gutierrez သူသည်မိမိအစ်ကို Ayoze ထက်သုံးနှစ်ကအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုရာမာ 23, 1990 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့ယောရှမွေလသည်။ Instagram ကိုမှအကြွေး
Big Sammy အစဉ်အမြဲဘောလုံးကွင်းထဲမှာအများဆုံးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ဦးအဖြစ်ကိုအောက်မေ့ရတော့မှာပါ။ အစောပိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းသူသည်သူ၏အစ်ကိုနှင့်ကိုက်ညီရန်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဦးတည်ချက်စောင်းသကဲ့သို့သူ့အစ်ကိုကသူ့ကိုအနည်ထိုင်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ကုမ္ပဏီကူညီပေးနေ၏အန္တိမပူဇျောသက်ကာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မင်းသိလား?… Sammy သည်သူ၏အစ်ကိုနှင့်အတူနယူးကာဆယ်လ်အတွက်ဖြေရှင်းအပေါ်သို့ non-လိဂ်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဇွန်လ 2014 အတွက် Tyneside အပေါ်သူ၏ရောက်ရှိကတည်းက Ayoze ရဲ့လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ကောင်းစွာလူသိများသည်စဉ်တွင်, သူ့အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ခရီးဝေးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေထံမှနည်း-ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ဖာရက်အကြောင်းဆွေမျိုး: ဖာရရဲ့မိသားစုထဲမှာမအားလုံးအထီးသားတို့သည်ဘောလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ဖြစ်ကြသည်။ ပင်တိုးချဲ့မိသားစု။ မင်းသိလား?… စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ် Ayoze ရဲ့ဝမ်းကွဲ Maria Jose Perez Levant UD Femenino များအတွက်ရှေ့ဆက်လည်းစပိန်အမျိုးသမီးအမျိုးသားရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့ Cousin- Maríaဟိုဆေးဖာရ။ YouTube ကိုမှအကြွေး
သူမ၏အသွင်အပြင်ကနေတရားစီရငျ, သင်အလွယ်တကူ Perez ဖို့နီးစပ်ဆင်တူသတိထားမိလိမ့်မယ်။
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံ
TransferMarker အဆိုအရ Ayoze ဖာရလက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုး 10,00 စက်€ရှိပါတယ်။ £ 45,000 သူ့ရဲ့အပတ်စဉ်လုပ်အားခဧကန်အမှန်သူ့ကိုသန်းကြွယ်သူဌေးဘောလုံးသမားစေသည်။ ဤသည်, သို့သော်, တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေမပေးပါဘူး။
Ayoze သည်သူ၏ဘောလုံး Moni စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စမတ်သည်။ ဤသည်အရူးနဲ့တူဖြုန်း, ဒါမှမဟုတ်သူ၏ဘဝပုံစံကိုပြောင်းလဲမပေးကိုဆိုလိုသည်။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့။ Instagram ကိုမှအကြွေး
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
အဆိုပါအမည် "Ayoze"မကြာခဏနိုင်ဂျီးရီးယားကနေသူ့ရဲ့မူရင်းရှိသည်ဖို့တချို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အမည်အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံအစ်ဂဘိုစကားပြောအနွယ်မှပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Ayoze ဖာရက်ရဲ့အမည်ပြောင် "ဖြစ်ပါတယ်ayo"။ ဤသည်အမည်ပြောင်လည်းနိုင်ဂျီးရီးယား၏ရုဘာစကားပြောအနွယ်အားဖြင့်ဘွားဖြစ်ပါတယ်
Ayoze ဖာရက်တစ် lookalike တစ်အချို့စန်တီယာဂို Munez ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူ့ရဲ့ကလေးဘဝစဉ်အတွင်း Ayoze ၏ကြောင်းစဉ်းစားအတွက်မှားပရိတ်သတ်များနှင့်ဘလော့ဂါများတယ်သောအမှုရှိပါတယ်။
Ayoze ဖာရမရေမတွက် Facts- ကသူ့ကြည့်-ရောနှောအကြောင်း။ တွစ်တာမှအကြွေး
Ayoze ဖာမကြာခဏကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာကြွယ်၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုအောက်မေ့သော 1990s မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပိုများသောဒါ, အ 1990s (ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဝပ်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ခညျြအနှောကိုမြင်လျှင်Boyz II ကိုလူတို့, Backstreet Boys နှင့် Westlife) ဂီတဇယားအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဆယ်စုနှစ်အင်တာနက်ကို (World Wide Web ကို) ၏မြင့်တက်ကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါ 1990 ရဲ့ပထမဦးဆုံး SMS ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျဒီဗီဒီကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်လည်း Sony က PlayStation ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နှင့် Google ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ PlayStation ၏ပြော Ayoze တစ်ဖီဖာစှဲလမျးသူဖြစ်ပါတယ်။
Ayoze ဖာရမရေမတွက် Facts- တစ်ဦးကဖီဖာ Lover ။ တွစ်တာမှအကြွေး
လက်ရှိတွင်အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Ayoze နယူးကာဆယ်ရဲ့ All-အချိန်ဂိုးသွင်းသူအတွက် 13 ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ် Owen လာမယ့်အောက်ပါအတိုင်း။
Ayoze ဖာရက်ရဲ့နယူးကာဆယ်ပန်းတိုင်အမှတ်ပေး Rank ။ တွစ်တာမှအကြွေး
Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
အောက်တွင်ဒီပရိုဖိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်ကိုရှာဖွေပါ။ ကြင်နာစွာသွားရောက်နှင့်ငါတို့စာရင်းသွင်း Youtube ကို Channel ကို နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ayoze ဖာရကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှု jonhera ဇူလိုင်လ 1, 2019 တွင် 6: 16 ည
ကိုယ့်ကိုအမြဲ ayoze တွေ့ဆုံရန်ချင်
ဇင်ဘာဘွေမှသူ၏ကြီးမားသောပန်ကာ im ။
Juan Bernat ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရှောလုသည် Niguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Brahim Diaz ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်